တည်းခိုရန် (porn) fap-free - Your Brain On Porn
ဒီ Reddit NoFap ပို့စ်ကနေ
ငါကလူပို့စ်တွေအများကြီးဖတ်နေနှင့်ဤ r / nofap အပေါ်အချို့သောယခု3ပတ်များအတွက်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပြီ။ အခုတော့ငါခံစားရတယ်, ပို့စ်များကိုငါ့ကိုတကယ် bugs သောပိုပြီးအနုတ်လက္ခဏာရှုထောင့်ကနေလာပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီ post ကိုပုံစံပြောင်းချင်ပါတယ် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့ ၀ င်သစ်များကိုလည်းပေးလိုပါသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်တွင်လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ကဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကသူတို့၏ရန်ပွဲ / စိန်ခေါ်မှုတွင်အသုံးပြုရန်လက်နက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားတစ် ဦး ကိုအဆင့် -by- ခြေလှမ်းထုံးစံ၌ဖျော်ဖြေခံရဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာသင်ပေးဖတ် YBOP, / r / nofapအဆိုပါ TEDx နှင့် YBOP ဗီဒီယိုများကြည့်ပါ။
သငျသညျ fapping ရပ်တန့်ချင်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဒီကသင်၏အသက်တာ၌တစ်ဦးအပြုသဘောအပြောင်းအလဲဖြစ်လိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကြောင်းပြချက်ပေး, ငါသည်အနာဂတ်ရည်ညွှန်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ချရေးသားခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အစပျိုးခြင်းအထဲကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါ, FAP စေသည်သို့မဟုတ် FAP ချင်သောအရာကို, တဖန်ထိုအဆင်းရေးသားခြင်းကူညီပေးပါမည်။
သငျ့ကိုတိုကျတှနျးထသောအခါနာရီဝန်းကျင်ပြုသောအမှုနိုင်ကအနည်းဆုံး5ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုစာရင်းတစ်ခုလုပ်ပြုပါမည်ဟုအချို့လှုပ်ရှားမှုများဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။
အခုဆိုရင်သင် nofap ခရီးစတင်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပတွင်အမျိုးမျိုးသော variable တွေကိုထိခိုက်ကြောင့် nofap ခရီးခန့်မှန်းရခက်သောကွောငျ့အောက်ပါတစ်ဦးခြေလှမ်း-by-step ထုံးစံ၌ပြုသောအမှုမရနိုင်ပါ။ ဒါဟာအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါပထမဦးဆုံး4ခြေလှမ်းများကိုထိန်းချုပ်၏ဤမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအ4ခြေလှမ်းများသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ထဲကမှန်းဆအလုပ်ယူကိုပယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မူဘောင်ပေးပါ။
Upkeep: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးသိမ်းဆည်းထားပါ, ဤခရီးရှေ့ဆက်ရန်သင့်အကြောင်းပြချက်ခိုင်ခံ့စေ / ထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်။ ဒါ့အပြင်သွေးဆောင်ပေါ်ထွန်းကြဘူးသည့်အခါသိမ်းပိုက်ထားသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏အစပျိုးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုသတိပြုစောင့်ရှောက်လော့။
ကိုတှနျးလှနျ: အရမ္မက် လာ. , ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါဘူးတဲ့အခါသူတို့က, ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းထွက်ရကချွတ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင့်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
Trigers around the work - တစ်စုံတစ်ခုကိုသင်သိထားလျှင်သင်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ကိုရှောင်ပါ။ သင်ခလုတ်နှိပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါကသင်ဤအခြေအနေကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်သတိရစေခြင်းဖြင့်အခြေအနေကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုပပျောက်: ကသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဤဖြစ်ကောင်းအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းစွာအစာစား, အလုပ်ထုတ်, ရှေ့ဆက်အချိန်သင့်ရဲ့အလုပ်ကို, တစ်တသမတ်တည်းအိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်ဇယားရှိသည်, အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်, etc ဒီဖြစ်ကောင်းအဲဒီမှာရဖို့အလုပ်ကြာသည်အတိုင်းပြုပါရန်အခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကဲ့သို့ရရှိသွားတဲ့ အလေ့အကျင့်များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ပို. ပင်ဒါကြောင့်တိုင်း 1-3 ရက်သတ္တပတ်အပေါ်4နောက်ထပ်အရာကိုလည်းသင်တို့အထဲကအလေးပေးပါလိမ့်မယ်အလွန်အကျွံပြောင်းလဲနေတဲ့သော်လည်းသတိထားရှိစေသတည်း။
ယခုတွင်သင်သည် nofap သင့်ရဲ့ 30 / 90 / 120 / 180 ရက်ပတ်လုံး, ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! တဖန်သင်တို့အသက်တာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအောငျနိုငျဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုနဲ့တူ PMO စွဲလျှင်, PMO အလယ်အလတ်ရန်မပြန်လာလည်းမရှိ။
ဒီကျရှုံးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအားလုံးအတူတကွဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်စခြင်းသည်ကြောင့် debugging ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးပျက်ကွက်မဟုတ်ပါဘူး။ 1 ခြေလှမ်းနှင့်သင့်စာရင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထပ်မံစတင်နိုင်ရန်ကျောသွားပါ။
ဒီကြောင်းသင်၏ခေါင်းကိုထဲကအတွေး Get ခိုင်မာသော။ ဒါကအရှုံးပေးဖို့ဆင်ခြေတစ်ခုပဲ။ ငါဒါကိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့လိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါမလျှော့ချနိုင်ဘူး။
တစ်ကြိမ်တွင်တစ်မျိုးတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ သင် NoFap ခရီးကိုစတင်လိုက်ပါကသင်၏ဘဝတွင်အခြားအရာများကိုပြောင်းလဲရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ငါတို့မှာလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငါတို့လုပ်သမျှအားလုံးဟာဒီအဝေးကိုစွန့်ပစ်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူး။
ဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့အချို့ကိုကူညီနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုရေးနေတုန်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ် -“ ငါ ၂၁ ရက်ပဲရှိသေးတယ်၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ ဖြတ်ဖို့အတွက်ငါဘယ်သူအကြံပေးရမလဲ။ ” ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အမြဲတမ်းပြန်သုံးလာပေမယ့် PMO ငါအလွယ်တကူငါ၏အတိုက်တွန်းချက်များကိုအရှုံးပေးခြင်းနှင့်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်သောအမှိုက်ပုံးအစားအစာနှင့်ဆေးရွက်ကြီးစွဲလမ်းနေသောကြောင့်ငါသဘောပေါက်လာတယ်
သင်ပုံမချသည့်နေ့ရက်များကိုရေးချပြီး၎င်းတို့ကိုခြေရာခံပါ။ သင်ပြက္ခဒိန်တွင်ရက်အတန်ကြာမဖြတ်နိုင်သို့မဟုတ်အမှတ်အသားများကိုမှတ်သားထားခြင်းဖြစ်စေ၊ ဤခရီး၌သင်မည်မျှဝေးဝေးရောက်ရှိနေသည်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမြင်တွေ့ရခြင်းသည်အမှန်တကယ်အားတက်ဖွယ်ကောင်းပြီးသင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုဆက်လက်တည်မြဲနိုင်သည်။
တှေးတောဆငျခွအရှင်ဝေးကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့စိတျကိုရှင်းလင်းရေးနှင့်ငါ့အသက်ရှူအာရုံစိုက်။ ငါ 20 မိနစ်နှစ်စုံတစျနေ့လုပျမြားနှငျ့ကယ့်ကိုဗဟိုပြုခံစားရတယ်။ သင်ချင်တယ်ဘယ်လိုအစဉ်အဆက်ရှည်လျားဘို့တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ပေမယ်5မိနစ်ထက်မနည်းဖြစ်သင့်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၅-၈ မိုင်အကြားတစ်ပတ်လျှင် 5-6 ကြိမ်လမ်းလျှောက်သည်။ ဒါဟာငါ့ကိုအိမ်ထဲကငါ့ကွန်ပျူတာကနေရရှိသွားတဲ့။ ငါသည်လည်းစွမ်းအင်အမြောက်အများကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူခြင်းနှင့် fap ရရှိရန်ခက်ခဲစေသည်။ ငါသည်လည်းယောဂသို့မဟုတ်အခြားအားကစားလည်းအကြံပြုပါသည်။ ငါကကိုယ်အလေးချိန်တက်တာကိုဂရုစိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးစေပြီး၊
သမ္မာသတိရှိကြလော့။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့တစ်ညတာဗုံးကြဲခြင်းနှင့်နောက်တစ်နေ့တွင်အစာငတ်မွတ်ခြင်း၊ မြေပဲထောပတ်နှင့်ဂျယ်လီကဲ့သို့ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့် fapping ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတစ်ခုခုပဲလက်နှင့်လက်သွားတတ်၏။ အရက်သည်စိတ်ဓာတ်ကျနေသောကြောင့်သင်၏ယုတ္တိဗေဒနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီးသင်၏လမ်းကြောင်းကိုနှင်ထုတ်နိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အရာရာကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်လိုလျှင်အရက်ကိုရှောင်ပါ။ ငါဆေးခြောက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းကိုငါမသိ, ဒါကြောင့်သူတို့ကထုတ်လုပ်မှုတန်ပြန်သို့မဟုတ်မပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကငါမပြောနိုင်ပါ။ ငါသူတို့ကိုသော်လည်း fap စဉ်အတွင်းကူညီပေးနေစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။
အိမ်ထဲကထွက်ပါ။ ရိုးရိုးလေးပါဟုထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်အလေ့အကျင့်၏သတ္တဝါများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏“ လုံခြုံစိတ်ချရသောဇုန်” တွင်နေထိုင်လိုကြသည်။ အိမ်မှသင်များများရလေလေ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်သွားပါ၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲအိမ်တွင်မနေပါနှင့်။